साधारण तारेखमै रिहा भए डा. केसी, अनशन आज टुंग्याउने तयारी
२०७४ पौष २७ बिहीबार ०४:३१:००
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डा. गोविन्द केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका केसी मुक्त भएका छन् । उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर सत्याग्रहमै बसेका छन् । उनले आफ्नो सत्याग्रहका बारेमा बिहीबार छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए । उनी निटक स्रोतका अनुसार उनले आज आफ्नो १४ औं अनशन टुंगो लगाउने तयारी गरेका छन् ।
प्रधान न्यायाधीशमाथि छानविनको माग राखेका केसीको मागबमोजिम प्रधान न्यायाधीशको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सर्वोच्चले झिकाएपछि केसीले अनशन अन्त्यको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । तर केसीले छलफल गरेर बिहीबार मात्रै निर्णय लिइने बताएका छन् ।
उनले अदालतको फैसलालाई सकारात्मक भएको बताउँदै यो भूमिका निर्वाह गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै अदालतको आदेशपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा भोलिसम्ममा निर्णय लिने बताए ।
“जुन आदेश भयो यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु,” डा. केसीले भने, “केही कुरा अझै बाँकी नै छ । तर पनि आगामी कदम के हुन्छ भन्ने भोलिसम्ममा निर्णय लिनेछु ।”